GURYAHA DAWOOYINKA EE FEERKA FARAS - SOOSAARKA DALAGGA
Maqaallada sixidda bogga ah ee jimicsiga
Guryaha bogsashada ee feerka farasku maaha sabab muhiim u ah faafitaanka ka badan tayada qurxinta ee qoryaha. Marka la eego tan, qodobka hoos ku xusan waxaan si faahfaahsan u baran doonaa jimicsiga fardaha, sifooyinka dawooyinka iyo ka hortagga.
Wanaajinta sifooyinka gogosha
Guryaha daawada ee kelyaha faras ayaa daboolaya tiro badan oo cuduro ah. Goobta ugu horreysa, geedku waxaa lagu qiimeeyaa awooddiisa ah inuu saameyn ku yeesho walxaha borotiinka ee dhiigga, si looga hortago abuurista xinjiro dhiig.
Waxaa intaa dheer, iyada oo loo mahadcelinayo isticmaalka daroogada jimicsiga, derbiyada maraakiibta ayaa la xoojiyaa, dhiigkarrada dhiigga ee ugu weynaa waxay noqdaan kuwo ballaadhan, taas oo mar labaad ka caawisa in laga hortago thrombosis. Daweynta laf-dhabarka oo lagu muujiyay:
dhiigbaxa xididdada (inta badan ka yimaada sanka);
diarriyo dhiig karka;
Soo saarida dhirta ayaa leh hanti bactericidal ah, waxay ka caawisaa in ay yareyso caabuqa iyo kicisaa habka bogsashada nabarrada. Maraqyada lafdhabarta ayaa sakhraamaya si loo hagaajiyo habka dheef-shiidka iyo xitaa qaaxada. Marka cudurada dheef-shiid kiimikaad ee ku jira unugyada iyo xayawaanka loo yaqaan 'chestnut' waxay diyaarinayaan mukhaadaraad gaar ah oo lagu xoqdo.
Ma taqaanaa? Faransiiska, jadwalka la dubay waa mid ka mid ah cunnooyinka culus. Si kastaba ha noqotee, miraha faras cagaarka ah looma isticmaalo ujeedadan, maaddaama ay ku jiraan xaddi badan oo glycosides qadhaadh, taas oo dhadhanka aad u xun. Laakiin beeraha, miraha waxaa badanaa loo isticmaalaa sida xayawaanka xoolaha.
Xitaa adkaanta cawsku waxay leedahay bogsashada bogga - waxaa loo isticmaalaa gynecology. Waxaa lagu talinayaa in la sameeyo decoction ee marinka maraq, kaas oo ka caawiya Belyah. Decoctions chestnut waxay joojin kartaa xitaa dhiig-raacidda. Ragga, diirka miro ayaa ka caawiya inay ka hortagaan caabuqa qanjirka 'prostate'.
Qaybaha farshaxan farabadan sababtuna tahay ka kooban kiimikada. Gaar ahaan, isaga abuurka waxaa ku jira:
10% oo saponiin ah, taas oo ay sabab u tahay geedi socodka dabiiciga ah ee unugyada dhiig-yari (reductions) ee unugyada dhiigga cas, loona sii deynayo hemoglobin;
qiyaastii 6% saliidda dufanka leh;
ilaa 10% borotiinka;
flavonoids oo hagaajiya cadaadiska dheecaanka;
fitamiin C, B iyo K.
Jilifka geedka ma aha mid hodan ku ah kiimikada. Waxaa ku jira fareerka, taas oo ay ugu wacan tahay cadaadiska ka soo cayayaanka kor u qaada bogsiinta nabarka. Waxa kale oo jira walxo kortex ah, walax anti-barar oo sidoo kale awood u leh inuu ka saarto astaamaha xididdada dhiigbaxa, samaynta lugaha oo soo jiidasho leh. Waxaa ku yaal koontada iyo kicinta, taas oo baabi'inaysa stasis guntin.
Flavonoids iyo fareeshka ayaa sidoo kale ku jira caleemaha. Intaa waxaa dheer, waxay ku qiimeeyaan joogitaanka rutin, taas oo hoos u dhigtay nabarada kilyaha oo yaraynaya xoogga xajinta dhiigga, iyo carotenoids - antioxidants dabiiciga ah, oo sidoo kale kordhiya difaaca jirka ee dadka.
Ubaxyo fiidmeer ah ayaa hodan ku ah rutin iyo flavonoids, iyo sidoo kale pectins, taas oo waxay caadiyan dheef-shiid kiimikaadkuna kor u qaadaa kolesteroolka.
Goorta iyo sida loo soo qaato xayawaanka
Si loo helo guryaha bogsashada si ay u muuqdaan xoog buuxda, waxaa lagama maarmaan ah in si haboon loo goosan karo. Tan iyo markii daawada dad ma aha oo kaliya miraha geedka this loo isticmaalaa, laakiin sidoo kale jilif, ubax iyo xitaa caleemo, waxaan tixgelin doonaa habka iyo waqtiga diyaarinta si faahfaahin dheeraad ah.
Waa muhiim! Wixii diyaarinta ee faransiiska cayayaanka ceeriin ku habboon oo kaliya ee ka mid ah noocyada uu, kuwaas oo leh midab cad oo inflorescences.
Jilibku ma laha tiro badan oo ka mid ah guryaha dawooyinka, sida midhaha, laakiin si loo yareeyo saamaynta jidhka bini'aadamka sidoo kale maaha mid u qalma. Hannaanka cagaarka goosashada waa inay billaabaan horraanta gu'ga, sida ugu dhakhsaha badan geedku wuxuu bilaabmaa inuu wareegto casiirka. Way ka fiican tahay in laga gooyo geedo yar yar, laakiin ma aha inaad ka qayb qaadatid si aanay u waxyeeleynin geedkii.
Jilibka la soo ururiyey ayaa la googooyaa gogo 'yaryar oo loo qoondeeyay qalajinta meel mugdi ah oo hawo wanaagsan leh. Caleenta qalalan waxaa lagu keydiyaa bacaha qoryaha, suufka ama waraaq adag. Si kastaba ha noqotee, waa in aan lagu kaydin wax ka badan laba sano, sida sababaha dabiiciga ah ee cagaarshowga waxay bilaabi karaan kareemka iyo isbedelka kiimikada.
Ubaxa waa la goostay bilowga hore ee ubax. Isla mar ahaantaana, lagama maarmaan in la gooyo dhammaan gebi ahaanba inflorescence - kaliya ka saar ubax leh tufaax iyo walxahaas. Waxaa lagama maarmaan ah in si qoto dheer loogu qalajiyo, oo midba midka kale u dhigo. Maskaxda ku hay in haddii qoyaanka hawadu kor u kacdo, iyo kuleylku aanay ku filnayn, ubaxu way kala jajabi karaan.
Sidaa darteed, haddii aadan haysan meel fiican oo aad ku qalajisid ubaxyo ubax, waxaad xitaa u isticmaali kartaa qalajinta korantada ujeedadaas.
Ma taqaanaa? Waxyaabaha laga soo saaro hawdka ayaa loo adeegsadaa xitaa timo jimicsi, maadaama ay tahay mid wax ku ool ah oo leh timo culus oo xoog leh. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale hoos u dhigi kartaa gabowga maqaarka, kicinta habka wax soo saarka kolajka.
Caleemaha waxaa sidoo kale lagu ururiyaa xilliga ubax ee geedka, taas oo ah, bishii May. Kaliya caleemaha qudhooda waxay u baahan yihiin in laga soo jaro geed - uma baahnid caws. Nidaamka qalajinta caleemaha wuxuu la mid yahay geeddi-socodka qalajinta. Waxay u fiicantahay in ay ku kaydiso weelasha daboolka ah ee la xiray si caleemaha aysan qoyanayn.
Daawooyinka dhaqameed iyo dhaqameed, kaliya miraha si fiican u bislaaday waa qiimo badan. Sababtan awgeed, waxaa lagama maarmaan ah in la soo ururiyo dhowaan xilliga dayrta ama xitaa bisha Sebtembar, marka sanduuqyadu isu beddelaan jaale iyo furan, iyo midhaha waxay noqon doonaan dhulka hoostiisa hoostiisa.
Daawada dhirta ama dawooyinka dhirta ayaa sii kordhaya caanaha. Waa kuwan qaar ka mid ah: Berry yew, qoryaha, caruuska madow, roodhida cagaaran, baraf, cad, hibiscus, elderberry, aloe, calendula, verbena, magnone hollywood, muuqaal la yiraahdo, foxtail, tarragon, anise.
Qalabaynta muddada dheer ee midhaha ayaa sidoo kale qiimaheedu qalajinayaan. Haddii aan la sameynin, weel xiran waxay ku jiri karaan ubaxyada. Qalitaanka waxaa sidoo kale lagu taliyaa meel mugdi ah oo hawo wanaagsan leh. Haddii aadan daneynin midhaha laftiisa, laakiin maqaarkiisa - waa laga saari karaa isla markiiba ka dib marka la soo ururiyo miraha.
Cunnada quraacda ee Chestnut
Daawada dadweynaha, jimicsiga fardaha ayaa loo adeegsadaa si firfircoon marka loo eego dhaqanka. Gaar ahaan, decoctions, tinctures iyo boomaatada waxaa laga diyaariyey, waxaa ka mid ah astaamaha isku dhafka taas oo kala duwan ku xiran tahay cudurku:
Tincture si loo daaweeyo dhibaatooyinka wadajirka ah. 20 g oo ubax ah oo lagu daray 500 ml oo ah vodka laba toddobaad. Fikrad ahaan, geedi socodkani wuxuu ka dhacaa meel mugdi ah heerkulka qolka. Tincture keentay waxaa loo isticmaalaa in lagu soo celiyo meelaha dhibaatooyinka. Waa muhiim in la sameeyo 1-2 jeer maalintii.
Tincture ee boogaha iyo xididdada varicose. Crush 50 g oo miro ah ee Booqday Furimaha Dagaalka hilib (ma adeyg waa in la kala sooco). Ku shub slurry 500 ml oo vodka ah oo bixi 7 maalmood. Cadaadiska dareeraha la qaato saddex jeer maalintii. Hal mar waxaad u baahan tahay inaad cabto wax ka badan 7 dhibcood.
Tincture for daaweynta cudurka kelyaha. Ku burbur labada miraha ee joodariga, ku rid heer-kulbeeg iyo ku shub biyo karkaraya mugga ah 250 ml. Ka dib markii miraha loo fidiyo 2 saacadood, tincture waxaa lagu qaadi karaa 2 tbsp. l Tirada aqbalaadda inta lagu jiro maalinta waa inay gaaraan 5 jeer.
Tincture of leukemia. 1 litir oo biyo ah 8 tbsp. l ubaxyo ubax ah oo la qalajiyey. Kuwaas oo dhan dabka ku shub, isku karkari, kuna tag si aad u dillaacdo 8 saacadood. Daawada keentay waxay u qaybsan tahay 5 qiyaasood oo sakhraansan maalintii.
Tincture for daaweynta gout. Ilaa 1 litir oo aalkolo caafimaad ah, qiyaastii 40 g oo ubax ah ayaa la isticmaalaa, kuwaas oo la isa siiyo todobaad. Hoos-u-dhaca soo baxa waxaa loo isticmaalaa sida cadaadiska, kuwaas oo si gaar ah waxtar u leh inta lagu jiro weerarrada.
Tincture for tuberculosis iyo thrombophlebitis. Dambe 30 g oo miro ah kuna buuxi 1 litir oo vodka ah. Ha illoobin todobaad. Tincture waxaa lagu talinayaa sida suunka kulul. Saameyno badan, miraha chestnut prehnuts ayaa la gelin karaa meelo jilbaha suunka.
Dib-u-soo-kabasho oo ah cirridka joodariga ah ee loogu talagalay qashin-qubka. Wixii decoction sida 1 tbsp. l saliida jimicsiga waxay isticmaalaan 1 koob oo biyo ah, ka dibna waxaa la kariyaa 5 daqiiqadood oo lagu dhajiyay ugu yaraan 1 saac oo kale. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan isticmaalin maraqkan si aad u yareyso, waxaa fiican inaad la tashato dhakhtar.
Decoction ah ee caleemaha loogu talagalay daaweynta gout, laabotooyinka, calool-xanuun caloosha iyo xaaladaha xanuunka ee caloosha mindhicirka. 500 ml oo biyo ah ayaa u baahan 1 tbsp. l caleemaha la jajabiyey. Ka qallaji caleemaha biyo karkaraya, waxay u baahan yihiin inay ku qabtaan kulayl yar ilaa 15 daqiiqo. Qiyaasta 100 ml ayaa la qaataa ka hor cunto kasta.
Decoction ah ee miro si loo yareeyo calaamadaha menopause. Mar labaad, kaliya khudradda miro-chestnut ayaa loo isticmaalaa, oo keliya 15 g ayaa loo baahnaan doonaa 1 koob oo biyo ah, karkari biyaha ilaa 25 daqiiqo, ka dibna ka baxso 1 saac oo kale. Maraq waxaa lagu talinayaa in la dhaqo laba jeer maalintii.
Biyo cad cad iyo barar. Ku burbur 5 khudaar oo ku dar 5 tbsp. l ubax qalalan iyo 500 ml oo saliid ah gabbaldayaha khudradda ah. Qaado walxaha biyaha qubeyska illaa 1 saac ilaa ay ka noqoto mid aad u yar ama ka yar. Caddayntu waa in lagu dabaqo meelaha dhibaatada leh.
Qubeyska fardaha ah ee loo yaqaan 'chestnut horse baths' ee cudurrada dermatolojiga. Isku qaso caleemaha baaldi, inflorescences iyo jilif ahaan qiyaastii u dhigma qiyaas ahaan siman, buuxi biyo karkarana ka bax ilaa 12 saacadood. Saameyntii keentay waxaa lagu shubay qubeys ah oo lagu qasi jiray biyo kulul. Nidaamka dharka noocan ah waxaa lagula talinayaa 15-20 daqiiqo.
Contraindications iyo guryaha waxyeelada leh
Cagaarnka Horse waxa uu leeyahay labadaba daawooyinka iyo waxyaalaha ka hortagga ah, taas oo ay ugu wacan tahay maadooyinka sare ee walxaha noolaha firfircoon ee ku jira miro, jilif, caleemo iyo ubax. Sidaa darteed, qaadashada mukhadaraadka ku saleysan faras faras ah laguma talinayo:
Dhiirrigelinta (cadaadiska dhiman), maadaama daroogada ku salaysan daaweynta xitaa ay sii yaraan karto;
xinjirta dhiigga oo liita;
si toos ah inta lagu jiro dhiigbaxa gudaha.
Markaad isticmaashid daawada loo yaqaan "chestnut" daawo, fiiri xaqiiqda meesha miraha iyo caleemaha la goosto. Tusaale ahaan, haddii alaabta ceeriin ah lagu soo iibsado gudaha magaalada ama meelaha leh shucaac sare, waa inaadan u adeegsan daaweynta.
Waa muhiim! Waa lagama maarmaan in la siiyo dhirta faraha ee xayawaanka yar, maaddaama ay heli karaan sunta. Sida caadiga ah waa suurtagal in la oggolaado in carruurta ay cunaan miro geedkan.
Waxaan rajeyneynaa in hadda aanad haysan wax su'aal ah oo ku saabsan waxa ku habboon ee jimicsiga faras. Si kastaba ha noqotee, waa in aan la iloobin in daaweyntani ay tahay in si taxadar leh loo isticmaalo, tan iyo saameynta jimicsiga jidhka bini'aadamka ayaa noqon kara mid foosha xun, gaar ahaan haddii ay jiraan dhibaatooyin dhiig.